Amerika aseYamerika Akunabo Abafana kwiMfazwe Yehlabathi II
Imiba Ulwalamano lwezobudlelwane
La madoda anesibindi akhange akhonze urhulumente owabathengisile
Ukuqonda ukuba ngubani o-No-No Boys, okokuqala kuyimfuneko ukuqonda iziganeko zeMfazwe Yehlabathi II. Isigqibo sikaRhulumente waseUnited States sokubeka abantu abangaphezu kwe-110 000 abavela eJapan ukuba bangene kwiinkampu zangaphakathi ngaphandle kwesizathu ngexesha lemfazwe elinye lezahluko ezihlazo kwiimbali zaseMelika. UMongameli Franklin D. Roosevelt wasayina i-Order Order 9066 ngoFebhuwari 19, 1942, malunga neenyanga ezintathu emva kokuba iJapan ihlasele iPearl Harbor .
Ngelo xesha, urhulumente wesigqeba wachaza ukuba ukwahlukana kwamazwe aseJapan kunye namaJapan aseMerika kumakhaya abo kunye nokuphila kwakuyimfuneko yokuba abantu abanjalo babesengozini yokhuseleko lwesizwe, njengoko babenokuba baceba uburhulumente baseJapan ukuba bahlele ukuhlaselwa okunye kwi-US kodwa Iimbali-mlando namhlanje zivuma ukuba ubuhlanga kunye nokuxhatshazwa kwabantu abantu baseJapan ngokulandela ukuhlaselwa kwePearl Harbour kwabangela ukuba kwenziwe umyalelo wokulawula. Emva koko, iUnited States nayo idibana neJamani kunye neItali ngexesha leMfazwe Yehlabathi II, kodwa urhulumente wesigqeba akazange avume ukuba abantu baseMelika bavela kwisiJamani naseNtaliyane.
Ngelishwa, izenzo zorhulumente karhulumente azizange ziphelelwe ngokunyanzelwa kwamanyathelo aseJapan aseMerika. Emva kokulahla la maMerika amalungelo abo, urhulumente wacela ukuba balwe nelizwe. Nangona abanye bevumile ukuba nethemba lokubonisa ukunyaniseka kwabo kwi-US, abanye baye bavuma.
Baziwa ngokuba yi-No-No Boys. Ukuxhaswa ngexesha ngexesha lesigqibo sabo, namhlanje Akunjalo-Akunjalo Abafana ababhekwa njengamaqhawe ekumanyeleni kurhulumente owawunyanzela inkululeko.
Uphando luzama ukunyaniseka
I-No-No Boys abayifumene negama labo ngokuphendula i-no emibini imibuzo kwiingcaphephe ezinikezelwa kumaJapan aseMerika abanjelwe kwiinkampu zoxinzelelo.
Umbuzo # 27 wabuza: "Ngaba uzimisele ukukhonza kwimikhosi yaseMelika ngokumalunga nomsebenzi wokulwa, naphi na apho uyalelwe?"
Umbuzo wama-28 wabuza: "Ngaba uza kufungela ukungqinelani okungafanelekiyo kwi-United States yaseMelika kwaye ukhusele ngokuthembeka iUnited States kwiphina okanye yonke into ehlaselwa yimikhosi yangaphandle okanye yasekhaya, kunye neenqwelo zonke zokuzithoba okanye ukuthobela umbusi waseJapan okanye enye urhulumente, amandla okanye intlangano? "
Okucaphukile ukuba urhulumente wase-United States unxuse ukuba bathembisa ukunyaniseka kwilizwe emva kokuphuka ngokukhululeka kwabo amalungelo abo, abanye baseJapan baseMelika benqaba ukungena kwimikhosi. UFrank Emi, u-internee kwinkampu yeNtliziyo yeNtaba eWintern, wayeyindoda enjalo. Ethukuthele ukuba amalungelo akhe ayinyathelisiwe, i-Emi kunye neyesigxina ezinye iintliziyo zangaphakathi zeentliziyo zakha i-Fair Play Committee (FPC) emva kokufumana izaziso eziqulunqwayo. I-FPC yabhengezwa ngoMatshi 1944:
"Thina, amalungu e-FPC, asiyiki ukuya kwimfazwe. Asiyiki ukubeka umngcipheko ubomi bethu kwilizwe lethu. Siyakuvuyela ukunikela ngobomi bethu ukukhusela nokugcina imigaqo kunye neenjongo zelizwe lethu njengoko kuchazwe kuMgaqo-siseko kunye neYilwayo yamaLungelo, kuba ekungabikho kwayo inkululeko kuxhomekeke kwinkululeko, inkululeko, ubulungisa kunye nokukhuselwa kwabo bonke abantu, kuquka namaJapan aseMerika kunye namanye amaqela amancinci.
Kodwa ngaba sinike inkululeko enjalo, inkululeko enjalo, ubulungisa obunjalo, olukhuseleko? HAYI!!"
Wagwetywa ngenxa yokuma
Ngenxa yokwala ukukhonza u-Emi, abathathi-nxaxheba be-FPC kunye nabangaphezu kwama-300 abaphakathi kwiinkampu ezili-10 bashushiswa. U-Emi wakhonza iinyanga ezili-18 kwipolitenti yaseburhulumenteni eKansas. Ubuninzi be-No-No Abafana babhekene nesigwebo seminyaka emithathu seminyaka emithathu entolongweni ejele. Ukongezelela ekukholweni, abaphakathi abazange banqwenele ukukhonza emkhosini bajongene nokuhlaselwa kweendawo zaseJapan zaseMerika. Ngokomzekelo, iinkokeli zeJapan American Citizens League zazichaza izigqeba zokuhlaselwa njengezinkathazo ezingathembekanga kwaye zithi zibonelela abantu baseMerika ingcamango yokuba amaJapan aseMerika ayengabonakali.
Kwabahlali abafana noGene Akutsu, ukuhlaselwa kwezinto kwangaphambili kwathatha umthwalo onzima.
Ngoxa wayephendule kuphela u-No kuMbuzo wesi-27-ukuba akayi kukhonza e-US imikhosi ejongene nokulwa apho yayilawulwa khona-ekugqibeleni wawahoxisa uxwebhu oluqapheleyo olwamukelweyo, okubangela ukuba akhonze iminyaka engaphezu kweminyaka emithathu entolongweni yaseburhulumenteni eWashington. Waphuma entolongweni ngowe-1946, kodwa oko kwakungekho msinyane kunina. Ummandla waseJapan waseMerika wamgxotha-wambi wamxelela ukuba angabonakali ecaweni-kuba uAktsu kunye nenye inyana ayengamhloneli urhulumente wephondo.
"Ngenye imini kuye kwafika kuye waza wathatha ubomi bakhe," u-Akutsu watshela i-American Public Media (APM) ngo-2008. "Xa umama esweleka, ndibhekisela kwinto yokulwa nemfazwe."
UMongameli uHarry Truman waxolela bonke abahlaziyi bexesha elidlulileyo beemfazwe ngoDisemba 1947. Ngenxa yoko, iirekhodi zobugebengu zamadoda aseJapan aseMelika ayenqaba ukukhonza emkhosini asuswe. U-Akutsu utshele i-APM ukuba unqwenela ukuba unina wayesekho ukuva isigqibo sikaTruman.
"Ukuba wayehlala nje omnye umnye ixesha elide, sasingenayo imvume evela kumongameli esithi sonke sikulungele kwaye unobomi bakho bonke," wachaza. "Yonke into ayephila kuyo."
Ifa le-No-No Boys
Incwadana ka-1957 ethi "Akukho-NoNtshontsho" kaYohn Okada ithatha indlela abantu baseJapan basebenzayo-ababaleki abaye babandezeleka ngayo ngenxa yokungahloneli. Nangona u-Okada ngokwakhe empeleni waphendula ewe kwimibini yombuzo kwi-intanethi yokunyaniseka, ebhala kwi-Air Force ngexesha leMfazwe Yehlabathi II, wathetha no-No-No Boy ogama lakhe linguHajime Akutsu emva kokugqiba inkonzo yakhe yemikhosi kwaye wanyuswa ngokwaneleyo ngamava ka-Akutsu ukuxelela ibali.
Le ncwadi iye yafakela ingxaki ephazamisayo yokuba akukho A-Akunabantwana abaye banyamezela ukwenza isigqibo esicatshulwa njengesiqhawe. Ukutshintshwa kwendlela Akunabikho Abafana abaye baqondwa ngayo inxalenye ngenxa yokuvuma kukaRhulumente kwinyanga ka-1988 ukuba iphosakele amaJapan aseMerika ngokuyiqhuba ngaphandle kwesizathu. Kwiminyaka elishumi elinesibini kamva, i-JACL yaxolisa ngenxa yokukhupha i-draft resisters.
NgoNovemba ka-2015, umculo othi "Ukunyaniseka," ochaza ukuba akukho Mfana-ongekho Mfana, owaqala kwi-Broadway.
Ngaba iNkampani yamaFashion igunyazisa iNkcubeko yaseMelika yaseMelika
Ubunzima obujongene namaBini ahlukeneyo ngokobuhlanga kunye namhlanje
Iingcebiso ezi-5 zokuphatha ukungavumeleki kobudlelwane bakho bobuhlanga
Ziziphi iindlela zokuhlaziywa kukaColin Kaepernick we-National Anthem Protest?
Indlela yokuhlamba i-Scuba Gear yakho
Iinguqulelo eziphezulu ze "O Obusuku Ubusuku" ngabaculi bamaKristu kunye neeVangeli
Konke Okufuneka Ukwazi Nge-Vault Gymnastics